Blockchain News 12 Janoary 2018 - Blockchain News
Janoary 12, 2018 Admin
Shinoa fikarohana Baidu nandefa Blockchain-as-a-service sehatra
Tranonkala Shinoa fikarohana goavana Baidu efa nanomboka ny azy blockchain-as-a-service (BaaS) sehatra.
Miorina amin'ny teknolojia mivelatra ny Baidu, mametraka ny sehatra misokatra avy amin'ny fanomezana izay tena “manampy ny mpampiasa” blockchain service.
Araka ny mafy ny vita fanoloran-tena tranonkala, “Baidu Trust” mamela hitondrana ireo fivoriam sy hay fantarina ny fifanakalozana, ary azo ampiharina amin'ny toe-javatra isan-karazany mampiasa, ao anatin'izany ny vola niomerika, Hafanàm-po an billing, banky bola fitantanana, fiantohana ara-bola fanaraha fitantanana, sy ny maro hafa.
Governemanta Amerikana amin'ny teny vondrona miasa mifantoka amin'ny cryptocurrencies
US bola Sekretera Steven Mnuchin hoy ny zoma fa ny Filan-kevitry ny fanaraha-maso ara-bola Stability, ny governemanta vatana izay manombana rafitra ara-bola mety, no namorona ny vondrona miasa mifantoka amin'ny cryptocurrencies.
Mnuchin nanamarika ny dingana nandritra ny tarehiny ao amin'ny The ara-toekarena Club in Washington, D.C. rehefa nanontaniana momba ny lohahevitra momba ny bitcoin.
“Tena mifantoka amin'ny cryptocurrencies,” nanazava Mnuchin, nanondro fifanakalozan-kevitra amin'ny hafa dalàna ao anatin'ny U.S. governemanta ary taty aoriana dia milaza: “Te-ho azo antoka fa ny olona ratsy dia tsy afaka mampiasa ireo vola mba hanao zava-dratsy.”
Mnuchin koa fa ny olana dia izay ny U.S. governemanta dia manao ny G-20 ihany koa ny vondrona iraisam-pirenena.
Mnuchin dia nanontany raha Federal Reserve dia mety hampitombo ny tenany nomerika dikan-Fiat vola.
“Ny Fed ary tsy mieritreritra misy mila izany amin'izao fotoana,” hoy Mnuchin.
Rosia Sberbank manambara blockchain laboratoara
Sberbank, iray amin'ireo banky lehibe indrindra ao Rosia, dia nanambara ny blockchain laboratoara mba hampitombo sy fitsapana blockchain mifototra amin'ny vahaolana.
Ny laboratoara vaovao mikendry ny hiteraka vokatra prototypes, mpanamory fiaramanidina hanao fitsapana ary miisa blockchain mifototra amin'ny raharaham-barotra vahaolana for Sberbank Group, hoy ny fanambarana an-gazety.
Araka ny Igor Bulantsev, Sberbank ny filoha lefitra ambony, blockchain dia afaka manampy eo amin'ny “reshaping” ny raharaham-barotra ara-bola tsena, ary koa ny banky ny asa sy ny tolotra.
Blockchain elektronika sonia volavolan-dalàna natolotra tao Tennessee
A mpanao lalàna ao Tennessee dia nametraka volavolan-dalàna vaovao izay manaiky blockchain sonia toy ny rakitsoratra ara-dalàna elektronika, nanamarika ny farany ezaka mpanao lalàna hanao izany tato anatin'ny herinandro vitsivitsy.
ny volavolan-dalàna, Tennessee atolotra ny Antenimiera-panjakana mpanao lalàna Jason Powell amin'ny Jan. 10, Nanatanjaka koa tapa-lalàna fitoriana any Florida sy Nebraska.
Fa ny amin'ny ezaka any Florida sy Nebraska, dia mbola ho hita eo ny fomba hafa toy ny mpanao lalàna ho fihetsiky ny fepetra mifindra amin'ny alalan'ny dingana ny adihevitra.
Online banky Swissquote ny tombony bebe kokoa izany noho ny toe-tsaina Bitcoin varotra
Online banky Swissquote fijery nohavaozina ny tombony ho an'ny 2017, rehefa nandray soa avy amin'ny raharaham-barotra tany cryptocurrencies mahery. Ny orinasa no saron'ny rano tamin'ny liana for bitcoin varotra.
Gland-monina Swissquote manantena vola mba efa ampifanampiana 186 tapitrisa ariary any Soisa 2018, 8 tapitrisa mihoatra noho ny efa forecast amin'ny farany indrindra forecast. Hoy ny banky dia mamoaka pretax tombony ny momba ny 45 tapitrisa ariary, araka ny fanambaràna iray nivoaka androany.
Ny maranitra fiakaran'ny vola sy ny fitomboan'ny tombony dia vokatry ny lafin-javatra roa, hoy Swissquote.
Varotra be mpanjifa bebe kokoa amin'ny Fiarovana sy ny vahiny fifanakalozana, raha ny orinasa ihany koa ny soa avy amin'ny fampidirana ny cryptocurrency varotra.
Swissquote no voalohany amin'ny aterineto Eoropa banky ny hanomboka fanatitra toy izany in Jolay, 2017.
Japana DMM Group nandefa Bitcoin fifanakalozana
DMM Group, ny Japana-monina sy ny Internet eCommerce orinasa Nihazonako ny fandefasana vaovao antsoina hoe DMM fifanakalozana Bitcoin.
Ny orinasa dia mikasa ny fanatitra 24/7 mpanjifa fanohanana, ary amin'izao fotoana izao ny vaovao nifehy Bitcoin fifanakalozana Japana.
Ny fomba ofisialy mafy dia voasoratra ara-panjakana ho toy ny "vola virtoaly mpivarotra’ ao amin'ny Japoney Finance Bureau
Previous Post:Bitcoin Hardforks inona moa izany?
Next Post:Blockchain News 13 Janoary 2018